Costco inuu dib u bilaabo warqadda musqusha iyo raashinka iibsiga biyaha dhalada ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shopping » Costco inuu dib u bilaabo warqadda musqusha iyo raashinka iibsiga biyaha dhalada ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Sannad ka hor waxaa jiray yaraanta badeecadda, hadda waxay haystaan ​​badeecado fara badan, laakiin waxaa jira laba illaa saddex toddobaad oo dib u dhac ah sidii loo keeni lahaa maxaa yeelay waxaa jira xad ku saabsan isbeddelada muddada-gaaban ah ee xamuulka iyo baahiyaha gaarsiinta ee alaab-qeybiyaha.
Costco wuxuu ku dhawaaqay xadka iibsiga soo socda ee badeecadaha qaarkood inta lagu jiro wicitaanka dakhliga Khamiista.
Xadka iibsiga ee dib loo soo nooleeyay ayaa yimid kadib markii shirkado aan tiro lahayn ay soo rogeen xeerar la mid ah sanadkii la soo dhaafay markii masiibada ay bilaabatay, taasoo ka tagtay khaanadaha dukaanka oo laga xayuubiyay waxyaabaha daruuriga ah.
Costco CFO waxay kaloo aragtay in yaraanta weyn ee jajabka kombiyuutarka ay wali “saamaynayso waxyaabo badan,” oo ay ku jiraan kiniiniyada, ciyaaraha fiidiyaha iyo qalabka waaweyn.
Costco Wholesale Corporation, oo ah shirkad caalami ah oo Mareykan ah, oo ka shaqeysa in ka badan 500 dukaan tafaariiqda ah oo waaweyn oo ku yaal Mareykanka iyo 200-oo lagu daray dibedda, ayaa ku dhawaaqday inay ku soo rogi doonto xadka iibsiga alaabada qaar ay iibiso, inta lagu gudajiro wicitaan dakhliyeed Khamiista.
Sida laga soo xigtay CostcoSarkaalka maaliyadeed ee ugu sarreeya (CFO) Richard Galanti, oo ah tafaariiqle Maraykan ah ayaa dib u bilaabi doona xadka iibsiga shayada “muhiimka ah” qaarkood, oo ay ku jiraan warqadda musqusha iyo biyaha dhalada ku jira.
Isagoo hogaaminaya wicitaanka dakhliga shirkadaha, Galanti wuxuu sharraxay dhowr cadaadis oo ku saabsan silsiladaha sahayda wuxuuna xusay kor u kaca baahida loo qabo masiibada, isagoo ku andacoonaya in Covid-19 Kala duwanaanshaha Delta wuxuu wadaa waddo weyn oo ku saabsan alaabada.
Galanti ayaa yidhi, "Waxyaabaha sababa silsiladaha sahayda iyo sicir -bararka waxaa ka mid ah dib -u -dhaca dekedda, yaraanta konteenarrada, carqaladeynta COVID, yaraanta qaybaha kala duwan, alaabta ceyriinka ah iyo walxaha, cadaadiska qiimaha shaqaalaha iyo gawaarida iyo yaraanta darawalada," Galanti ayaa yiri, isagoo raaciyay "qorshayntu waa muhiim" caqabadaha.
CFO si sax ah uma sheegin goorta xadka dib loo soo saari doono - iyadoo leh Costco haysashada hore u xaddidnayd badeecadaha qaarkood maalmaha hore ee COVID-19.
Isagoo muujinaya sababaha yaraanta, Galanti wuxuu tusaale u soo qaatay hal shirkad sahayda nadiifinta ah oo ku dhibtooday inay alaabta ku haysato khaanadaha, isagoo sheegay inay hadda wajahayso dhibaatooyin ka duwan kuwii ay samaysay 2020.
“Sannad ka hor waxaa jiray yaraanta badeecadda, hadda waxay haystaan ​​badeecado fara badan, laakiin waxaa jira laba illaa saddex toddobaad oo dib-u-dhac ah sidii loo keeni lahaa maxaa yeelay waxaa jira xad ku saabsan isbeddelada muddada-gaaban ah ee xamuulka iyo baahiyaha gaarsiinta ee alaab-qeybiyaha, ”Ayuu yiri.
CFO waxay kaloo aragtay in yaraanta weyn ee jajabka kombiyuutarka ay wali "saameyneyso waxyaabo badan," oo ay ku jiraan kiniinno, ciyaaraha fiidiyowga iyo aaladaha waaweyn, iyagoo soo jeedinaya dhibaatooyinkaas "inay u badan tahay inay sii fidaan 2022."
Xadka iibsiga ee dib loo soo nooleeyay ayaa yimid kadib markii shirkado aan tiro lahayn ay soo rogeen xeerar la mid ah sanadkii hore sida kii Covid-19 masiibada ayaa bilaabatay, iyadoo ka tagtay khaanadaha dukaanka oo laga xayuubiyay qaar ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah - laga yaabee inay ka mid yihiin madaxdooda: warqad musqul.
In kasta oo tafaariiqlayaashu xoogaa dib u soo laabteen tan iyo wejigii hore ee iibsiga argagaxa, bishii Maarso, Maamulaha soosaaraha qoryaha-Brazil ayaa ka digay in TP-yaraanta kale ee caalamiga ahi ay ku dhowdahay geeska dhabar adag oo loogu talagalay qaybinta.